गगनका कानुनी सल्लाहकार, जो मिर्गौला प्रत्यारोपण गरे पनि १७ घण्टा खट्छन्
चैत २२, २०७३ बुधवार ०१:४६:०० प्रकाशित
स्वास्थ्यमन्त्रीका रुपमा गगन थापा सफल हुँदै जानुमा उनको दृष्टिकोण र इच्छाशक्तिसँगै उनलाई साथ दिने टिमको लगनशीलता र खटाइ पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। स्वयंसेवकका रुपमा स्वास्थ्यमन्त्री थापालाई मनैदेखि साथ दिने केही व्यक्ति छन्। जो आफ्नो विषयमा दक्ष मात्रै छैनन्, देशका लागि सकेको गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध पनि छन्। स्वास्थ्यमन्त्रीका यिनै सहयोगीमध्ये पर्छन् अधिवक्ता राजु कटुवाल।
गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री भएदेखि दैनिक १७ घन्टासम्म खटेर कानुनी उल्झन सुल्झाउने र सल्लाह दिने गरिरहेका छन् अधिवक्त कटुवाल। स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ‘स्वस्थ’ राख्न नीति, नियम, कानुन बनाउन साथ दिइरहेका उनी आफैँ भने मिर्गाैला रोग पीडित हुन्।
दुवै मिर्गौला फेल भएर प्रत्यारोपण गराएका उनी आफू जीवनको ‘दोस्रो इनिङ’मा रहेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘यो इनिङलाई अझ सार्थक बनाउन चाहन्छु।’ संयोगले उनी आफूले रुचाएको र नागरिकले अपेक्षा गरेकै मन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार बने। आफू अस्वस्थ हुँदाहुँदै देशको स्वास्थ्यलाई नजिकबाट नियालिरहेका उनी स्वास्थ्य मन्त्री थापाका विश्वासिला सहयोगी हुन्।
आफ्नो नजिकको मान्छेले दिएको मिर्गाैलाको सहाराले जीवनरथ गुडाइरहेका उनी स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही योगदान दिन चाहन्छन्। उनले भने, ‘मन्त्री थापासँगै जोडिएर गरेको कामलाई अवसरका रुपमा लिएको छु। देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था बुझ्ने मौका पाएको छु। र, आफ्नातर्फबाट इमान्दारीपूर्वक काम गरेको छु।’
मिर्गौला फेल भएको थाहा पाउँदा
त्यसबेला उनी अब्बल अधिवक्ताका रुपमा आफूलाई प्रमाणित गरिरहेका थिए। सँगै उनी राजनीतिक र कानुन व्यवसायीको संघ–संस्थाको नेतृत्व तहमा आफूलाई स्थापित गराउने क्रममा थिए। प्रजातान्त्रिका विचार समूहका महासचिव रहेका उनी बार एसोसिएसनको केन्द्रीय सदस्य बन्ने तयारी गरिरहेका थिए।
कुरा २०७० साल साउनको हो। रक्तचाप बढेको महसुस भएपछि उनी पुगे शिक्षण अस्पताल। प्रजातान्त्रिक विचार समूहका उपाध्यक्ष डा. कविरनाथ योगी शिक्षण अस्पतालमै थिए। उनलाई चेकजाँचका क्रममा सहज भयो। रक्तचाप नाप्ने बित्तिकै देखियो, २२०/१७०। अन्य शारीरिक परीक्षणपछि डाक्टरले मिर्गाैलाले काम गर्न छाडेको बताइदिए। ३५ वर्षको उमेरमा हिँड्दै गरेको जुझारु युवाले यो कुरा पत्याउनै चाहेन। उनी सम्झन्छन्, ‘सामान्य बिरामी भएजस्तो लागेर अस्पताल पुगेको मान्छेलाई मिर्गाैला फेल भएको कुरा सुन्दा कस्तो महसुस होला? त्यो कल्पना पनि गर्न नसकिने क्षण थियो। मलाई पत्यार नै लागिरहेको थिएन।’ तर, परीक्षणले देखाएको नतिजा नपत्याई सुखै थिएन उनलाई।
उच्च रक्तचापका कारण मिर्गाैला बिग्रेको हुन सक्ने अस्पतालका डाक्टरहरुले जानकारी दिए। सकेसम्म प्रत्यारोपण गराउने सल्लाह डाक्टरहरुको थियो। उनकै दाई नाता पर्ने एकजना भारत, भेलोरको एक मेडिकल कलेजमा मिर्गाैलाको उपचार गराइरहेका थिए। ती दाइले उतै गएर थप परीक्षण र उपचार गराउन सल्लाह दिए।
‘भेलोर पुगेर जँचाएपछि थाहा भयो, मिर्गाैला बिग्रिनुको कारण उच्च रक्तचाप नभई रोगप्रतिरोधी क्षमता कमजोर भई शरीरले प्रोटिन धेरै उत्पादन गरेकाले रहेछ,’ मिर्गौला फेल हुँदाको क्षण सम्झिँदै भने, ‘कारण जे भए पनि के गर्नु, मिर्गाैला बिग्रिसकेको थियो। कि प्रत्यारोपण नभए निरन्तर डायलाइसिस। अरु त विकल्पै थिएन।’
जीवनको यो जटिल मोडमा उपयुक्त सल्लाह र आडभरोसा पाउनु पनि नयाँ जीवन पाउनु जत्तिकै हुँदो रहेछ भन्ने ठानेका छन् उनले। उनी लरतरो हिम्मत हार्ने मान्छे त थिएनन्। तर, रोगले शिथिल बनाएको बेला जस्तै मै हुँ भन्ने मान्छे पनि लडखडाउने उनको अनुभव छ। उनी आत्मबलको बिरुवा मर्न नदिने केही नाम सम्झन्छन्, ‘श्रीमती र परिवारका सदस्य भइहाले, कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौला, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल र गगन थापा नै हुन् मलाई हिम्मत दिने।’
२०७१ भदौमा उनको मिर्गाैला प्रत्यारोपण भयो। प्रत्यारोपण भएको मिर्गौलाले जब काम गर्न थाल्यो, उनले पनि आफ्नो काम गर्न थाले। जीवनको दोस्रो इनिङ यति ‘स्पिड’मा छ कि उनी रोक्ने कोसिस पनि गर्दैनन्। बिहान ५ बजेदेखि सुरु हुने उनको दैनिकी राति १० बजेसम्म दौडिरहन्छ। आफूलाई व्यस्त राख्दा उनले स्वास्थ्यको पनि उत्तिकै ख्याल गरिरहेका हुन्छन्। भन्छन्, ‘बिहान एक घण्टा दौडन्छु। औषधि खाने समय डाक्टरले भनेभन्दा तलमाथि पारेको छैन। सरसफाइ र खानपानमा उत्तिकै ध्यान दिन्छु।’
यसरी भयो गगनसँग भेट
२०५९ सालतिर गगन थापा नेविसंघको महामन्त्री थिए। त्यसबेला राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई असक्षम घोषित गरी सरकार विघटन गरेका थिए। ज्ञानेन्द्रको उक्त कदमविरुद्ध दलहरु गरेको आन्दोलनको अग्रभागमा थिए गगन। राजद्रोहको मुद्दा लगाएर गगनलाई जेल पठाइयो। नेपाल बार एसोसियसनका प्रतिनिधिहरुसँग मिलेर त्यो मुद्दाबाट गगनलाई मुक्ति दिलाउन राजु सक्रिय भएर लागे। त्यही बेला नजिकबाट चिनेका हुन् उनले गगनलाई। २०६२/६३ को आन्दोलनमा पनि गगन पक्राउ परे। त्यतिबेला पनि कानुनी सहयोग राजुले नै गरे।
२०६२ सालमा पोखरामा नेविसंघको महाधिवेशन भइरहेको थियो, गगन अध्यक्षका प्रत्यासी थिए। तर, आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका गगन महाधिवेशनको अघिल्लो दिनसम्म जेलबाट छुटेका थिएनन्। त्यसबेला राजुसहितको टिमले निकै पहल गरेपछि राति जेलबाट छुटेका गगन भोलिपल्ट महाधिवेशनस्थल पोखरा पुगेका थिए। त्यसपछि गगनले आफूलाई चाहिएको कानुनी सल्लाह निरन्तर राजुबाटै लिने गरेका छन्।
अहिले मन्त्री थापा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नीति नियम बलियो बनाउने प्रक्रियामा छन्। गगनको अपेक्षा छ, स्वास्थ्य मन्त्रीका रुपमा भविष्यमा जो आए पनि एउटा प्रणाली बसाउन सकियोस्। गगनको ‘सिस्टम’ बनाउने यो अभियानमा अधिवक्ता कटुवालको भूमिका महत्वपूर्ण छ। उनको लगन, खटाइ र दक्षता स्वास्थ्य मन्त्रीका लागि अर्थपूर्ण देखिन्छ।
अहिले सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउन बनिरहेको मस्यौदाका लागि राजु अहोरात्र खटिरहेका छन्। जनस्वास्थ्य ऐन, स्वास्थ्य प्रयोगशाला ऐन, अस्पताल गुणस्तर प्रमाणीकरण बोर्ड, मदिरा ऐन, आयुर्वेदिक नीति लगायत अन्य निर्देशिका निमार्णमा राजुले कानुनका केस्राकेस्रा केलाएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई परेका सबै मुद्दा उनले नै हेर्छन्, बहस गर्छन्।
म पहिलादेखि नै टिममा बसेर काम गर्दै आएको छु। केही निर्णय लिनुपर्दा या कुनै विषयमा आफ्ना धारणा बनाउनुपर्दा म टिममा छलफल गर्छु। हामी मन्थन गर्छौं र एउटा नतिजामा पुग्छौँ। काम गर्न एउटा बलियो टिम चाहिन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्छु। राजुजी लामो समयदेखि मेरो टिममा हुनुहुन्छ।
राजुजी मिर्गाैला बिग्रिनु अघिदेखि नै हामीसँग काम गरिरहनु भएको हो। त्यसैले उहाँको कार्यशैली थाहा थियो। तर, स्वास्थ्य मन्त्री भएपछि काम धेरै थियो। उहाँ मिर्गाैला प्रत्यारोपण गरेको व्यक्ति भएकाले समय दिन नसक्नुहोला, कामको रफ्तार पकड्न नसक्नुहोला भन्ने चिन्ता लागेको थियो। सुरुमा मैले उहाँलाई टिममा नराख्ने कि भन्ने पनि सोचेको थिएँ। त्यसको अरु कुनै कारण थिएन, उहाँको स्वास्थ्यको चिन्ताले मात्र हो। उहाँ धेरै पहिलादेखि नै मेरो टिममा रहेको मान्छे र एकदमै मिहिनेती। अन्ततः मैले उहाँलाई छुटाउन चाहिँन।
उहाँलाई स्वास्थ्यको टिममा लिने निर्णय एकदमै सही साबित भएको छ। टिमकै अरु साथीहरु भन्छन्, ‘उहाँ सबैभन्दा बढी खट्नुहुन्छ र दिइएको जिम्मेवारी सचेतनापूर्वक चाँडै सक्नुहुन्छ।’
हामी स्वास्थ्यका नीति निर्माणमा लागिरहेका छौँ। कानुन विज्ञ भएकाले यसको नेतृत्व राजुजीले नै गर्ने हो। त्यसमा उहाँ कानुनी कुरा मात्रै होइन, यथार्थ कुराहरु पनि उठाउनुहुन्छ। किनभने उपचारका क्रममा उहाँले भोगेका र देखेका कमजोरीहरु पनि नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण भएका छन्।
हामीले २०७४ वैशाख १ गतेदेखि मिर्गाैला प्रत्यारोपण निःशुल्क गर्ने तयारी गरेका छौँ। यसका लागि आइडिया उहाँबाटै आएको हो। मिर्गाैला प्रत्यारोपण गर्न पाउँदा एकजना व्यक्तिले परिवार र देशका लागि कति योगदान दिन सक्छ भन्ने उदाहरण पनि हो राजुजी। त्यसैमाथि डायलाइसिसका लागि लाग्ने खर्चले प्रत्यारोपण गराउन सकिने हिसाब उहाँले नै निकाल्नुभएको हो। टिममा हामीसँगै स्वास्थ्यको भुक्तभोगी भएकाले जनतालाई महसुस हुने खालका निर्णय लिन सहज भएको छ।